Globle Media: सत्यको कसीमा, तथ्यको खोजी ! 'सात करोड ठगी गरी प्रेमकुमार मल्लले जर्नेलमार्फत् धम्की दिई उन्मुक्ति पाउन खोजे'
'सात करोड ठगी गरी प्रेमकुमार मल्लले जर्नेलमार्फत् धम्की दिई उन्मुक्ति पाउन खोजे'
ग्लोबल संवाददाता आइतबार, असार २०, २०७८
काठमाडौं । ज्योति निर्माण सेवाका प्रबन्धक निर्देशक राजकिशोर साह गुप्ताले व्यवसायिक साझेदार प्रेमकुमार मल्लले ७ करोड रुपैयाँ नदिएर उल्टै सेनाका जर्नेलमार्फत् धम्की दिएको आरोप लगाएका छन् । आफू अन्यायमा परेको भन्दै सरकारसँग र नागरिक समाजसँग सहयोगको आग्रह गरेका छन् ।
आइतबार काठमाडौंमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा गुप्ताले तीनवटा आयोजनामा गरेको कामवापत्को रकम एक महिनामा दिने गरी दमक नगरपालिकामा वारेस नै बसेर हस्ताक्षर गरेपनि नदिएर उल्टै धम्की दिएको बताएका हुन् । उनले भने,‘आयोजनाको काम गरेको पैसा नदिने उल्टै धम्की दिने गतिविधि भयो ।’ मल्ललाई सेनाका एकजना जर्नेलले साथ दिदै आएको समेत गुप्ताले उल्लेख गरे ।
नेपाली सेनाका सहायक रथी हेमराज केसीले प्रहरी र सरकारी वकिललाई दबाब र प्रभावमा पारेर ठगी मुद्दाका अभियुक्त सम्धी नाता पर्ने प्रेमकुमार मल्ललाई उन्मुक्ति दिलाएको गुप्ताले आरोप लगाएका छन् । मल्लसँग १२ वर्षदेखि सँगै काम गरेको र लेनदेनको विषयमा विवाद भएको खुलाए । प्रेणा निर्माण सेवाका प्रबन्धक निर्देशक प्रेमकुमार मल्लले पार्टनरसीपको पैसा लगाएर आफ्नो रकम दिन अस्वीकार गरेको सुनाए ।
तीनवटा आयोजनाका ७ करोड रुपैयाँ एक महिनामा दिने गरी प्रशासनको रहोवरमा सहमति भएपनि कार्यन्यन नभएको बताए । उनले भने, ‘सहमति कार्यन्यन नगरेपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापामा निवेदन दिएको हुँ । मल्लले प्रशासनमा आएर ८६ लाख दिए ।’ ३० दिन पछि बाँकी पैसा दिने सहमती पत्रमा हस्ताक्षर गरे पनि नदिएर झुलाएको उनको भनाई छ ।
साझेदारका लागि बैंकिङ प्रायोजनका लागि साझेदार प्रेम मल्लको नाममा कागज बनाएर जग्गा पास गरेको र ठेक्काको काम सकिएपछि जग्गा फिर्ता गर्ने भनेकोमा विक्री गरेर ठगी गरेको सुनाए । ठगी गरेर मुद्दा चल्न नदिने गर्दा आफू घरबारविहिन हुने अवस्थामा पुगेको बताए । उनले भने,‘१६ करोड डुब्यो । अब कर्मचारीलाई तलब दिन नसक्ने भएको छु ।’
उनले साझेदारीमा रहेको दमकस्थित कार्यालयमा कर्मचारीहरुलाई तलव दिन, घरभाडा दिन नसकेको सुनाए । साझेदारले धोका दिएपछि नेपाली सेनाका सहायक रथी हेमराज केसीले फोन गरेर म सबै कारोबार मिलाइदिन्छु भनेपछि आफू रातारात झापा पुगेको बताए । उनले भने, ‘त्यहाँ पुगेपछि मेरो फोन हेमराजले उठाउनु भएन् ।’ शक्तिको आँडमा आफूलाई अन्यायमा पारेको गुप्ताले सुनाए ।
उनले आफुलाई पटक–पटक महेन्द्नगरको आर्मीको क्याम्पमा बोलाएर गएको समेत बताए । ‘मधेसी भएकाले म बाँच्न नपाउने हो ?’ सरकारसँग प्रश्न गरे, ‘मधेसीलाई स्वतन्त्रता छैन् हेप्ने, खेद्ने ?’‘पार्टीको लेनदेनको केसमा आर्मी, सेनाका मान्छे आउन हुन्छ की हुँदैन् ? जसको नाममा वारेन्ट पुर्जी छ त्यसलाई बोकेर लान मिल्छ की मिल्दैन् ?’ उनले प्रश्न गरे । सेनासँग सम्बन्ध नभएकै आधारमा अन्यायमा पर्नुपर्ने भन्दै असन्तुष्टि पोखे । ‘यो कति सम्म अन्याय हो,’ उनले भने, ‘हामीसँग सेनाको सम्बन्ध छैन भने के हामी बाच्न नपाउने ?’
पछिल्लो समय प्रेम मल्लले माथिसम्म सेटिङ गरेको भन्दै धम्काएको बताए । उनले भने, ‘माथिसम्म सेटिङ गरेको छु, प्रधानमन्त्री मेरै, राष्ट्रपति मेरै भन्दै मलाई पटक–पटक धम्क्याउछ ।’ यस घटनाको सत्य तथ्य पत्ता लगाई आफ्नो रकम जग्गा फिर्ता दिलाईदिन माग गरे ।
प्रकाशित मिति: आइतबार, असार २०, २०७८, १७:५०:००